‘बाबुरामलाई भगवान मानेँ तर अहिले आफैँलाई धिक्कार्छु’ भन्दै नयाँ शक्ति भक्तपुरकी संयोजकले दिइन राजिनामा, बाबुराममाथि पैसा बाँडेको गम्भीर आरोप - TESTING NEWS
Home / news / ‘बाबुरामलाई भगवान मानेँ तर अहिले आफैँलाई धिक्कार्छु’ भन्दै नयाँ शक्ति भक्तपुरकी संयोजकले दिइन राजिनामा, बाबुराममाथि पैसा बाँडेको गम्भीर आरोप
‘बाबुरामलाई भगवान मानेँ तर अहिले आफैँलाई धिक्कार्छु’ भन्दै नयाँ शक्ति भक्तपुरकी संयोजकले दिइन राजिनामा, बाबुराममाथि पैसा बाँडेको गम्भीर आरोप
विद्यार्थीहरुले समाज र देशको परिवर्तनका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सोचेँर म वामपन्थी आन्दोलनमा जोडिएँ । माओवादी जनयुद्ध सुरु नहुँदै हाम्रो परिवारले तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चालाई भोट दिएका थिए रे । जनयुद्ध शुरु भएपछि मैले सशस्त्र युद्धलाई नजिकैबाट नियालेँ । माओवादी लडाकुको हतियार लुकाएको र खान बस्न दिएको कारण हामी विस्थापित भयौं ।
सानैदेखि वामपन्थी परिवारको पृष्ठभूमिले होला, म जानेर या नजानेर माओवादीप्रति लगाव राख्न पुगेँ । माओवादीभित्र पनि मलाई बाबुराम भट्टराई विशेष मन पर्थे । कहिल्यै सेकेण्ड नभएको, एसएलसीमा बोर्ड फस्ट, पिएचडी गरेको विद्धान भन्ने उनको चर्चा सुनिन्थ्यो । म आफैँ पनि विद्यालयमा पढाईमा अगाडि । गुरुहरुसँग हाकाहाकी प्रश्न गर्थेँ । तर्कले शिक्षकहरुलाई पनि जित्न सक्ने विद्यार्थीमा गनिन्थँे । त्यसैले बाबुराम आदर्श हुनु स्वभाविकै थियो ।
म नेता भए भने बाबुराम जस्तो बन्छु भन्ने सोच्थँे । त्यही साँेच र व्यक्तित्वको कारण उहाँ मेरो आदर्श बन्नु भयो । म उहाँको लागि जोसँग पनि झगडा गर्थे । स्थिति यति विकराल बन्यो कि मेरो श्रीमानसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिने स्थितिमा पुग्यो । म ढुङ्गाको भगवान त मान्दिनँ तर बाबुरामलाई भगवानको ठाउँमा राखिएको थिएँ । बाबुरामले जे गरेपनि सहि नै हुन्छ किनकी उहाँ विद्वान जस्तो लाग्थ्यो ।
बाबुरामले एमाओवादी परित्याग गरेर गइसकेपछि म पनि मेरो श्रीमानसँग सम्बन्ध बिगारेर नयाँ शक्तिमा गएँ । बाबुरामले बनाउन लागेको घरमा एउटा ईट्टा थपिनु पनि ठूलै योगदान हुनेछ भन्ने लागेको थियो, तर मैले बाबुरामलाई जे सोचेको थिएँ, त्यो होइन रहेछ । मेरो आदर्शको जग बालुवाले बनेको रहेछ र त्यसको चमक शीशाले । टाढाबाट हेर्नु र नजिक गएर बुझ्नुमा धेरै फरक हुँदो रहेछ । यो पछिल्लो समयमा बाबुरामलाई अत्यन्तै नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाउँदा शीशाबहिरका बाबुराम र भित्र अर्कै रहेछन् भन्ने लाग्यो । त्यसैले आज म आफैले आदर्श मानेका व्यक्तिको अभियानबाट विलग भएको घोषणा गर्दैछु ।
जीवनमा बाबुरामलाई धेरैपटक समर्थन गरियो । यसले मेरै राजनीतिक व्यक्तित्व समेत पछि परेको हो । तर त्यसमा मलाई कुनै गुनासो छैन । तर अब आएर बाबुरामलाई समर्थन गरे भने मेरो आत्माले कहिल्यै मलाई माफ गर्ने छैन र पश्चातापको आगोमा जिन्दगीभरि जलिरहने छु ।
मैले नयाँ शक्ति निर्माण अन्तर्गत भक्तपुर जिल्ला संयोजक भएर काम गरँे । बाबुरामका धेरै अन्तरक्रियाहरुमा भाग लिएँु । मैले नयाँशक्तिको बारेमा नसा नसासम्म बुझ्ने मौका पाएँ यसबारे धेरै अध्ययन र छलफल पनि गरेको छु । मैले बाहिरबाट जे देखेको थिए र बुझेको थिए यो अभियानमा जोडिएपछि त्यो पाइएन ।
नयाँ शक्ति अभियानकाे जुलुसमा सहभागी गंगा दाहाल
मलाई लागिरहेको छ, नयाँ शक्ति भन्दा पुरानो शक्ति (बाबुरामको नजरमा) उत्कृष्ट रहेछ । महिला महिलामा प्रतिस्पर्धा गरेर उत्कृष्ट महिला छान्ने, दलित दलितमा प्रतिस्पर्धा गरेर उत्कृष्ट दलित छान्ने, मधेशी मधेशीमा प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट मधेशी छान्ने, जनजाति जनजातिमा प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट जनजाति छान्ने भन्ने खोक्रो भाषण सुनिएको थियो । तर होइन रहेछ । चाकरी र गर्नेबीच प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट चाकरबाजलाई छान्ने नियम रहेछ नयाँ शक्तिमा । जस्को नीति उसको नेतृत्व होइन रहेछ । नीति नै नभएकाहरुको नेतृत्व रहेछ । नीति र नियम नै नभएकाहरुको झुण्ड रहेछ नयाँ शक्ति । फरक मत राख्नेको विशेष कदर गरिनेछ भनिन्थ्यो तर फरक मत राख्नेलाई पानी बराबर गरिंदो रहेछ । सायद धेरै समय गुटगत राजनीति गरेका मान्छेहरुको समूह भएकाले होला यहाँ प्रत्येक तीन जना बराबर एउटा गुट छ ।
मैले त्यो झुण्डमा आपूmलाई एक्लो महसुस गरे । आर्थिक विषयमा पारदर्शिता हुन्छ भन्ने सुनेको थिए यहाँ त मन परेकालाई आवास सुविधासहित बिटाका बिटा पैसा उपलब्ध गराई दिने चलन रहेछ । मन नपरेकाहरु ओंठ मुख सुकाएर बस्न बाध्य रहेछन् । युवा पुस्तालाई राजनीतिमा अरुले प्रयोग मात्र गरे हामी नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पु¥याउँछौ । पच्चिस वर्षको युवा पनि पार्टीको केन्द्रिय सदस्य हुन सक्छ भन्नु हुन्थ्यो डा. भट्टराई तर खुलेयाम म एउटा बच्चाको आमालाई पनि फरक मत राख्दा बच्चा भनेर सम्बोधन गरियो । भनेपछि युवा पुस्ता भनेका त मेरो बुवा आमाको उमेरका मान्छे त होलान् नि भोटो फटाएर र कपाल फुलाएर बुद्धि आउने भएत उमेरको हिसाबले मेरो आमा पनि स्थायी कमिटिको दाबेदार हुनुहुन्छ ।
नयाँ शक्तिले माक्र्सवाद मान्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर कुनै पनि वाद नै नमान्ने मात्र होइन, “म जनयुद्ध भन्दा पहिले पनि कम्युनिष्ट होइन र जनयुद्ध पछि पनि होइन ।” भन्ने अभिव्यक्ति बाबुरामबाट आएपछि म अब गैर कम्युनिष्ट पार्टीमा बस्न सक्दिन । जनयुद्धको जगमा टेकेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भयो, आज त्यहि जनयुद्ध गलत भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँलाई त्यही सत्र हजारको बलिदानले बनाएको होइन ? सांस्कृतिक रुपमै विचलित भएका भगौडाहरुको नेतृत्वमा कसरी बसौं ? जस्को विरुद्ध जनयुद्ध गरेर १७ हजार निर्दोष दाजुभाई दिदीबहिनी सहिद हुनुभयो, हजारौ बेपत्ता र घाइते हुनुभयो, तिनै पञ्चेहरुलाई नमस्कार गरेर बस्न मेरो आत्मसम्मानले दिँदैन ।
म हिजो पनि माक्र्सवाद मान्थे आज पनि मान्छु र भोली पनि मान्नेछु म कम्युनिष्ट हुनुमा गर्व गर्छु । त्यसैले म आजको दिनबाट स्वतन्त्रपूर्वक बस्न चाहान्छु । मैले भक्तपुर जिल्ला संयोजकबट मात्र नभई नयाँ शक्ति निर्माण अभियानबाटै अलग्गिने निर्णय गरेको छु ।
श्रोत - एभेरेष्ट दैनिक